मेरो महान मास्टरपीस | Martech Zone
मेरो महान मास्टरपीस
मंगलवार, मे 22, 2007 बुधवार, मई 23, 2007 Douglas Karr
मेरा नजिकका साथीहरूले मेरो शिल्पको बारेमा म कत्ति उत्साहित छन् बुझ्दछन्। मैले तपाईंलाई भन्नु पर्दछ कि मैले परियोजना, रोजगारी, क्यारियरमा आफैंलाई अझ राम्रो बनाउन कोसिस गरें तर ... मेरो घरको तुलनामा यो बराबर हुन्छ, मेरो छोरो बिल र छोरी केटी। यदि मैले भोलि मेरो भाग्यलाई भेटें भने, म यो दुनिया छोडेर जान्छु कि मैले एक जवान मानिस र किशोरी केटीलाई प्रतिभाशाली, खुसी, निःस्वार्थ, मायालु, इमानदार, र कडा मेहनतीको रूपमा छोडेको छु।
मेरो छोराले मलाई चकित पार्छ प्रत्येक चोटि जब उसले गितार, माइक्रोफोन लिन्छ, वा आफ्नो पीसीमा आफ्नै संगीत मिक्स गर्दछ। उहाँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ IUPUI, एक भौतिकी डिग्री लिएर र ऊ फ्रेन्च, ध्वनिकी ईन्जिनियरि,, वा राजनीति विज्ञान सहित कुनै पनि क्षेत्रहरु मा माइनर हुन सक्छ। तपाईंले केही सुन्नु पर्छ उसको साइटमा उसको संगीत उनको प्रतिभा सुन्न, तर मलाई लाग्छ तपाईं सहमत हुनुहुन्छ।
प्रत्येक सप्ताहन्त वा त, बच्चाहरूले आफ्नो आमासँग मायालु समय बिताउँछन्। जे होस् हामीसँग years बर्ष भन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, यो एक राम्रो सम्बन्ध हो जुन हामी सबैसँग छ र हामी सबैले अर्कोलाई उच्च सम्मानका साथ राख्छौं। बच्चाहरूले कहिले पनि हामीलाई लडाई सुन्नपर्दैन, किनकि हाम्रो पूरा लक्ष्य उनीहरूको खुशी हुनु हो र हामी यसलाई बनाउनको लागि जे पनि गर्न सक्छौं।
एउटा उदाहरण, मैले कलेजको लागि केहि पैसा जुटाउन बिलको लागि केही स्नातक कार्डहरू आदेश दिएँ। उसलाई कार चाहिन्छ र किताबका लागि केही पैसा चाहिन्छ, मलाई लाग्छ ऊ ट्यूशनमा ठीक छ तर यसले अझै loanण लिन सक्छ। हामी विचार गर्ने छौँ। जे भए पनि, उसकी आमाले सबै घोषणाहरू उनको परिवार र साथीहरू र मेरो परिवार र साथीहरूलाई पठाउनुभयो। त्यो धेरै राम्रो छ। (कुनै पनि आमाबुबाको सम्बन्धविच्छेद भइरहेको वा सम्बन्धविच्छेद भएकोमा ... यो बच्चाहरूको बारेमा हो!)
हामी हाम्रो दिमाग बाहिर गाउँदै minute 45 मिनेट ड्राइभ खर्च गर्दछौं। ड्राईभिंग गरिरहेका व्यक्तिहरूले सोच्नु पर्दछ कि हामी पागल हौं र ड्राईभमा दुर्लभ अतिथिहरू प्रायः हामीसँग शोमा उफ्रिन्छन्। हाम्रो मनपर्ने Meatloaf द्वारा नरक बाट बाट बाहिर छ ... तर हामी सुन्न र सबै कुरा को लागी गाउँछन्। बाटोमा दुई 70० र s० दशकका स्टेशनहरू छन् त्यसैले केहि सीमितताबाट टाढा छैन।
र जब हामी गाउँदछौं, हामी यसमा सबै राख्दछौं ... अधिक नाटक र कान छेड्ने विलहरू, उत्तम। (हामी मेरो मनपर्ने खेल को लागी एकै चोटि गाई अवरुद्ध गर्छौं, "त्यो रोडकिल अनुमान गर्नुहोस्")। जब हामी एक्जिट Ex० बीमा पुग्छौं, हामी प्राय: सास बाहिर, आवाज बाहिर, र पागल जस्तै हँसौं।
केही महिना अघि मेरी छोरीले ब्लूमिंगटनमा इण्डियाना गाउने प्रतियोगितामा भाग लियो। यो लगभग प्रकोप थियो - पहिलो कुञ्जी अवतरण भयो र केटीले सम्पूर्ण गीत बिर्सिए। उनी कराए, आफै रचे, र फेरि गाउन थालिन्। मैले उनलाई सहायता गरिनँ - मलाई थाहा थियो कि उनले आफैलाई पछाडि लानु पर्छ (तर केटो हामीले उनलाई अ h्गालो गरे पछि)। केटीले एक सुन्दर काम गरीरहेको छ र गोल्डमा उत्रियो।
आज राती ग्रीनवुड मध्य विद्यालयमा 6th, 7th र grade कक्षा कोर्सहरूको लागि वसन्त कन्सर्ट थियो। केटीसँग एकल थियो, "निलोमा पोर्ट्रेट" र एक महिना देखि घरको वरिपरि गाउँदै आएको छ। उनीले आज राति जानु भन्दा पहिले मैले उनलाई सल्लाहको एउटा सानो टुक्रा दिएँ - एउटा स्थान खोज्नुहोस् र हेरौं। आज राति कन्सर्टमा दुई सय अभिभावक र विद्यार्थीहरू थिए त्यसैले मलाई थाहा थियो कि उनी नर्भस हुनेछन्। उनी जानु अघि उनले मलाई भनिन् कि उनी मेरो लागि गीत गाउँदैछिन्।
म आज दिनभरि केटीको बारेमा सोच्दै छु र उनीले कत्ति राम्रो गरिन्। र केटा, उनले! उनको एकल जिम मा bellowed र मान्छेको टाउको बदलियो। मसँग एक धेरै राम्रो भिडियो क्यामेरा छैन तर मैले मेरो PDA क्यामेरा फोन बाहिर निकाले र घटना रेकर्ड गरे। मँ माफी माग्दछु कती भयानक क्वालिटी हो र ध्वनि धेरै चर्को छैन, तर तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि केटीले ब्लुज गाउँदैछन्।
मेरो आँखामा आँसु छैन भनेर यदि मैले भनेँ भने म झूट बोल्छु। म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन कि यो कत्ति अविश्वसनीय थियो। वरपरका मानिसहरूले फर्किए र भने, “के यो तिम्रो छोरी हो? उनी उत्कृष्ट थिइनन्! "। क्याटीमा एक नजर र म त्यो कति खुसी थियो देख्न सक्थें। मेरा बच्चाहरू मेरा सबैभन्दा ठूला कृतिहरू हुन्।
केहि कहिल्यै नजिक आउँदैन।
WordPress: CSS अनुकूलित गर्नुहोस् यदि पोष्ट आज प्रकाशित भयो भने
मई 23, 2007 मा 3: 05 एएम
उत्कृष्ट पोष्ट डग! यसलाई सुरू देखि अन्तसम्म पढ्नुहोस्, उच्च क्याटिमा उच्च पाँच!
मई 23, 2007 मा 8: 43 एएम
धन्यवाद, टोनी। म एक गर्व पापा हुँ!
मई 23, 2007 मा 3: 45 एएम
बच्चाहरू कसरी हुर्कन्छन् यो अचम्मै छ।
र त्यस दिनको भनाइको रूपमा: "चतुर बच्चाहरूका अभिभावकहरू विश्वास गर्छन्।"
र, हे, यो तपाईं होइन जो आफ्नै सामग्री होस्टिंग बारेमा ब्लग गर्नुभयो? अझै अन्तिम दुई भिडियोहरू जहाँ दुबै youTubeGoogled छन्?
मई 23, 2007 मा 10: 19 एएम
सुन्दर पोष्ट डग। म बाटोमा एक छोरा छ, र म मात्र आशा गर्न सक्छु कि म उहाँप्रति राम्रो बुबा बन्न सक्नेछु।
म पनि यो आश्चर्यजनक लाग्छ कि तपाईं आफ्नो पूर्व पत्नी संग यस्तो स्वस्थ सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईले भनेको जस्तो, यो बच्चाहरुका लागि हो, र यसले वास्तवमै सहयोग गर्दैन यदि तपाई सम्पूर्ण समय लड़िरहनु भएको छ र बच्चाहरूलाई एक अर्काबाट टाढा खेलिएको मनको खेलको जस्तो खेल्नु हुन्छ। मेरा साथीहरू त्यस्तै अभिभावकहरूसँग हुर्केका थिए, र हेर्नु यो साँच्चिकै दु: खी छ।
मई 23, 2007 मा 10: 43 एएम
बधाई ब्रान्डन! म बाटोमा एक टन गल्ती गरेको छु, विश्वास गर्नुहोस्। मैले मेरा बच्चाहरूलाई भनेको छु कि मलाई थाहा छ उनीहरूलाई चोट पुर्‍याएको छ जब म रिसाएको थिएँ र कहिलेकाँही उनीहरूलाई मैले ध्यान दिएनौ उनीहरूको हकदार छ। तर प्रत्येक पटक जब हामी एकअर्काबाट टाढा हुन्छौं हामी एक अर्कालाई भन्छौं हामी एक अर्कालाई माया गर्छौं - जब हामी रिसाउँछौं पनि। र हामी अंगालो ... धेरै!
म आफ्ना गल्तीहरूका बारे मेरा बच्चाहरूसँग इमानदार रहें र मैले उनीहरूसँग गल्ती गरेको बेला माफी चाहन्छु। जति सक्दो म गर्न सक्छु, म तिनीहरूलाई आफ्नो निर्णय लिने अनुमति दिन्छु र त्यसपछि हामी ती निर्णयहरूको नतीजाबारे छलफल गर्दछौं।
मेरो छोरा हाम्रो मित्रता कत्तिको नजिक छ बारेमा चुटकुले। हामी उसका साथीहरू भन्दा धेरै बाहिर पर्दछ। IUPUI को लागी, उहाँ वास्तवमै घरमा बस्नुहुनेछ! म अझै हाकिम हुँ (अहिलेको लागि)।
मई 23, 2007 मा 3: 36 PM
डगलस, त्यो धेरै राम्रो थियो। हामी सबै संग यो साझा को लागी धन्यवाद। यो चाखलाग्दो छ कि तपाईं कसरी सबै कारमा खेल खेल्नुहुन्छ। तपाइँ बच्चाहरु तपाइँको भाग्यशाली छन् ... भगवान आशीर्वाद !!
मई 23, 2007 मा 7: 48 PM
धन्यबाद डग - म वास्तवमा अभिभावक बन्नको लागि प्रतिक्षा गर्दैछु, तर आफैंमा राम्रो जागिर खाने र मेरा बच्चाहरूलाई नराम्रो नबनाउने बारेमा चिन्ता गर्छु।
मलाई लाग्छ कि तपाईं उनीहरूसँग इमान्दार हुनु भनेको तपाईंले आफ्नै जीवनमा गरेका गल्तीहरूका बारे इमान्दार हुनु हो र उनीहरूलाई आफ्नै निर्णय लिन दिन निश्चित रूपमा जाने तरिका हो। त्यहाँ केहि पाठहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नै लागि सिक्नुपर्दछ, यो कठिन मार्ग भएता पनि।